I-TWITTERATIS IBASH DEMI MOORE YE-SUCKY BATHROOM DECOR UKHETHO - UBONISO
UDemi Moore kutshanje ebesematheni ngokutyhilwa okuyimfihlo ngobomi bakhe bomtshato noAshton Kutcher. Her
UDemi Moore kutshanje ebesematheni ngokutyhilwa kwakhe okuyimfihlo Ubomi bomtshato noAshton Kutcher . Kukhutshwa imemori yakhe ethi 'Inside Out', kwaye ukuza kuthi ga ngoku, ibikukuphikisana okuhle.
Kwaye ubuye ezindabeni kwakhona. Kodwa ngeli xesha, abalandeli bakhe bayambetha kwaye ukhetha igumbi lokuhlambela!
UDemi Moore Wenza iintloko nge-Decor Bathroom Decor
UDemi Moore kutsha nje uthathe i-Instagram ukuze abelane nge-Behind-The-Scenes zokurekhodwa kwakhe kwe-podcast phakathi kwesifo. Uqala ipodcast entsha enesihloko esithi 'Ungcolile uDiana. Wayerekhoda ipodcast kwigumbi lakhe lokuhlambela.
Xa wayethumela imifanekiso, wayelindele ukuba abalandeli bakhe abayi-1.9 kwi-Instagram babonise ukonwaba. Kodwa kwenzeka into engalindelekanga.
Ngelixa abanye abalandeli bakhe babenemincili malunga nepodcast, kodwa uninzi lwalugxile ekuhonjisweni kwegumbi lakhe lokuhlambela. Baphawule ngemifanekiso yakhe kwaye babhala nakwi-Twitter malunga nokukhetha okungalunganga kwendlu yangasese eyenziwe nguMoore.
Emfanekisweni, siyabona ukuba uMoore uhleli kwisofa yeentyatyambo ngaphakathi kwigumbi lakhe lokuhlambela. Emva kwakhe kukho isinki eyenziwe ngomthi esetyhula kunye nodonga lwezitena olwenziwe ngesiqingatha. Kumfanekiso wesibini, sinokubona umbono webhafu yakhe eyenziwe ngeethayile ezimhlophe. Kwaye kanye ecaleni kwebhafu, sinokubona imilenze kwinto ekhangeleka ngathi sisikrweqe! Uninzi lwabalandeli bakhe luye lwabuza ukuba kutheni enegumbi lokuhlambela eligcwele. Kwakhona, inkawu encinci engaxhonywanga exhonywe eludongeni yabamba ingqalelo yabo, nto leyo eyothusayo.
UDemi Moore Ubamba Indima kwi-Mid-Pandemic Thriller, uSongbird
Ingoma yeengoma yimiboniso bhanyabhanya ezayo eza kwenziwa nguMichael Bay, uAdam Goodman, Andrew Sugerman, kunye no-Eben Davidson. Iyaqhutywa kwaye ibhalwe nguAdam Mason kunye noSimon Boyes, ngokwahlukeneyo.
Umboniso bhanyabhanya wengoma ufumene intengiso eninzi emva kokuba yimovie yokuqala ukuqala ukudubula phakathi kobhubhane weCoronavirus.
Imincili yothando ezizayo imalunga nendoda ehamba izinto ezoyikekayo zehlabathi elinenkohlakalo ukuba kunye nesithandwa sayo Ngexesha lokutshixa . Ibonisa ukuba umlinganiswa ophambili webhanyabhanya uphuhlise ukungakhuseleki ngokuchasene nentsholongwane! UDemi Moore, kudliwanondlebe naye lwamva nje, uthe imuvi ibonisa imeko eyoyikekayo yesifo sikaCononavirus, kwaye izisa amaphupha ethu amabi esikrinini.
UDemi Moore uthathe inxaxheba kwindumasi, uSongbird. Uza kuba ne-KJ Apa kunye noSofie Carson, odlala indima ephambili kumdlalo bhanyabhanya.
iikowuti ezilusizi malunga nesizungu
Ngaba i-hbo max iya kukhawuleza kwaye ibe nomsindo 9
Uluhlu lweefilimu zejoe pesci
iinkosi zemoto: umhlwa kubutyebi bexesha lesi-3
nini ixesha elitsha le-blindy blinders
ibonisa njengamaphupha amabi ekhitshini